Sida loo dar Image in MP3 Files Si fudud
> Resource > MP3 > Sida loo fudud ku dari Image in Your MP3 dhammaan faylasha
"Sidee ku darto sanam u ah .mp3 file dhawaaqa?
Hi, waxaan qabaa hal su'aal. Waxaan ku badaley badan oo aan Lugood music .mp3, sida aan ku dari kartaa cover album ah si faylka? Waxaan doonayaa inaan u saaray heesaha oo aan PS3 on Christmas, lakiin waxaan doonayaa inaan arko daboolida album iyo waxyaalaha. Thanks! "- Dakota
Qof kasta waxa uu leeyahay dhibaato la mid ah la Dakota? Waxaan halkaas ka hor, laakiin hadda wuxuu heli waxaan ku daray image cusub ama beddeli image album jira arrin xiiso leh iyo wax fudud in la sameeyo. The Wondershare TidyMyMusic u Mac ( TidyMyMusic Wondershare ) ayaana ka dhigtay hawl fudud. Waxaa si toos ah u aragto farshaxanka album ee dhammaan MP3 files iyo sidoo kale i siinaysaa awood u leh inay beddesho images sida aan door bidayaa. Haddaba i soo raaca oo waxaan ku tusi doonaa waxaad sida loo isticmaalo hoos ku qoran.
Download barnaamijkan si loo soo dajiyo aad Mac. Markaasaa waxaa u furo oo smartly maktabadda Lugood aad ku darto oo dhan music ee iskaan doonaa. Oo wakhtigii soo socda mar kale aad u furo, soo celin habka iskaanka haddii ay dhacdo in aad keeno heeso badan si Lugood.
Fiiro Gaar ah: Wixii files MP3 in aan maamula Lugood ah, waxaad tagi kartaa nidaamsan Music inay dajiyaan heesaha oo iskaa. Jiid iyo hoos u folder music si ay saxaarad file ama guji badhanka File Open in aad ku darto files music ah.
2 Raadi sawirada oo dhan MP3 files
Barnaamijkan wuxuu si toos ah ka heli kartaa sawirada loogu talagalay oo dhan MP3 files. Sax checkbox ee Search for Songs Allaha oo guji badhanka Scan, ka dibna waxa ay bilaabi doonaan in ay shaqo. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, dhammaan macluumaadka ku saabsan MP3 files waxaa laga heli karaa, oo ay ku jiraan magacyada track, fannaaniin, lyrics iyo sidoo kale farshaxanka album.
3 dar images in MP3 faylasha
Waxaad Cudarada karaa muuqaalada MP3 files ka dib markii ay heleen si tiirarkii loo gudbin karaa oo soo bandhigay qalab la qaadi karo aad. Riix hees iyo hubi in ay image khaanadda saxda ah. Markaas riix batoonka Codso ayaa salka ku jira in lagu daro image ay u file MP3 ah. Waxa kale oo aad dooran kartaa dhowr heeso iyo codsan waqti.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad beddesho oo sanamyada la jira, riix hees iyo icon Edit ku khaanadda saxda ah oo aad file a image deegaanka jiidi kara aagga album tahay oo buuxi oo ah berrimmadii kale tafatirka.
Ma sugi karaa in ay isku day ah oo hadda? Just ka hor tago oo soo dejisan waxaa loo soo dajiyo aad Mac, ka dibna waxa kale oo aad ka heli kartaa oo intaa ku daray in images mp3 wax xiiso leh in uu sameeyo.